बैंकिङ समूहको सव इन्डेक्समा सुधार, जीवन र निर्जीवन बीमाको अवस्था कस्तो ? – Clickmandu
बैंकिङ समूहको सव इन्डेक्समा सुधार, जीवन र निर्जीवन बीमाको अवस्था कस्तो ?
क्लिकमान्डु २०७७ साउन १६ गते १६:४५ मा प्रकाशित
पुँजी बजारमा देखिएको सुधारसँगै विभिन्न कम्पनीको उपसूचकमा पनि सुधार हुँदै गएको छ । पछिल्लो समयमा बैंकिङ समूहको सब इन्डेक्समा पनि सुधार देखिएको छ । एक महिनाको अवधिमा बैंकिङ समूहको उपसूचक १४५.३९ अंकले बढेर १२३७.६७ बिन्दुमा रोकिएको छ ।
असार १८ गते बैंकिङ समूहको सब इन्डेक्स १०९२.२८ थियो । त्यसपछि निरन्तर बढ्दै गयो । नेप्सेसँगै बैंकिङ समूहको सब इन्डेक्समा पनि सुधार देखिँदै गएको थियो । बजारमा केही गिरावट शुरु भएसँगै बैंकिङ समूहको सब इन्डेक्समा पनि गिरावट देखिएको छ ।
नेपालको पुँजी बजारमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा बैंकिङ समूहको छ । जसले गर्दा बजारमा देखिने उतारचढावमा समेत बैकिङ समूहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । जसले गर्दा बजार बढ्दा बैंकिङ समूहको सब इन्डेक्समा उतारचढाव देखिएको छ ।
असार १८ गतेदेखि सामान्य बढेको सब इन्डेक्स असार ३० गतेदेखि निकै बढेको देखिएको छ । असार ३० गते ११२८ बिन्दुमा थियो । यसपछि निरन्तर बढेको सब इन्डेक्स साउन ५ गते सबैभन्दा बढी उच्च बिन्दु १२९९.७६ बिन्दुमा रहेको थियो । साउन ४ गते १२७८.९९ बाट एकैपटक बढेर १२९९.७६ बिन्दुमा पुगेको थियो ।
त्यसपछि भने क्रमशः बैंकिङ समूहको उपसूचकमा गिरावट देखिएको हो ।
यस्तै जीवन बीमा समूहको सब इन्डेक्समा पनि निकै सुधार देखिएको छ । असार १८ गते ७ हजार ३७६.९३ रहेकोमा अन्तिम कारोबारसम्म आइपुग्दा १ हजार २३७.७४ अंकले बढेर ८ हजार ६१४.६७ बिन्दुमा पुगेको छ ।
असार १८ गतेबाट बढ्न थालेको उपसूचक २३ गतेसम्म निकै सुधार देखिएको छ । त्यसपछि केही उतार चढाव देखिएको छ । साउन १ गते ८ हजार १८५ रहेकोमा साउन ४ गते ५४१ अंकले बढेर ८ हजार ७२६ बिन्दुमा छ ।
त्यसपछि भने केही उतारचढाव भएको देखिन्छ । त्यसपछि पुनः बढेर उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो । त्यसपछि सामान्य गिरावट देखिएको छ ।
साउन १२ गते ८ हजार ८५७.३९ बिन्दुमा पुगेको थियो । एक महिनाको कारोबारमा जीवन बीमा समूहको सब इन्डेक्समाथि पुगेको अंक नै यही हो । यसपछि भने घटेर अन्तिम कारोबारमा दिनमा जीवन बीमा समूहको उपसूचक ८ हजार ६१४.६७ बिन्दुमा छ ।
यता निर्जीवन बीमा समूहको सब इन्डेक्समा पनि सुधार देखिएको छ । असार १८ गते ५ हजार ५०८.६३ रहेको निर्जीबन बीमा समूहको उपसूचक एक महिनामा १ हजार ५९.२९ अंकले बढेर ६ हजार ५६७.९२ बिन्दुमा छ ।
असार १८ गतेबाट बढेको निर्जीवन बीमा समूहको सब इन्डेक्स असार २३ गतेसम्म निरन्तर बढेको थियो । त्यसपछि भने केही उतार चढाव देखिएको छ ।
एक महिनाको बीचमा सबैभन्दा बढी असार १२ गते ६ हजार ८१४.६० बिन्दुमा पुगेको थियो । त्यसपछि पुनः घटेको थियो । घटेर अन्तिम कारोबार दिनमा ६ हजार ५६७.९२ बिन्दुमा रहेको छ ।
नेप्सेद्वारा स्टक डिलर सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत,१ हजार कित्ता भन्दा कम सेयर खरिद बिक्री गर्न नपाउने
लिवर्टी इनर्जी कम्पनी आइपीओ भदौ ३ गते आउँदै
एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कम्पनीको आइपीओ बाँडफाँट
साउनको अन्तिम सोमबार सेयर बजारमा हरियाली
एनआईडिसी डेभलपमेन्ट बैंकको धितोपत्र सूचीकरण खारेजः नेप्से